Igqwetha e-Eindhoven | Law & More -I-advocatenkantoor e-Eindhoven
Ngaba ungusomashishini okanye umntu wabucala ojamelene nengxaki yezomthetho kwaye ungathanda ukuba isonjululwe? Nceda unxibelelane Law & More, Amagqwetha ethu ayakuvuyela ukukunceda! Kwi Law & More Siyaqonda ukuba, nokuba ungusomashishini okanye umntu wabucala, yonke imiba yezomthetho inye kakhulu kwaye nokuba nawuphi na umcimbi wezomthetho unokuba nefuthe elikhulu kubomi bakho. Ke, ngokuchaseneyo neenkampani ezininzi zomthetho, Law & More ikunika into eyongezelelweyo. Apho uninzi lweefemu zomthetho zinolwazi kuphela lwendawo echaziweyo yomthetho wethu kwaye zihlala zenza imisebenzi, Law & More ikubonelela ngenkonzo ekhawulezayo kunye nendlela yakho yobuqu ukongeza kuzo zombini ulwazi olubanzi kunye noluthe ngqo.
UFUNA IGQWETHA KWIMPUMELELO?
ZOQHAGAMSHELWANO LAW & MORE!
Ngaba ungusomashishini okanye umntu wabucala ojamelene nengxaki yezomthetho kwaye ungathanda ukuba isonjululwe? Nceda unxibelelane Law & More, Amagqwetha ethu ayakuvuyela ukukunceda! Kwi Law & More Siyaqonda ukuba, nokuba ungusomashishini okanye umntu wabucala, yonke imiba yezomthetho inye kakhulu kwaye nokuba nawuphi na umcimbi wezomthetho unokuba nefuthe elikhulu kubomi bakho. Ke, ngokuchaseneyo neenkampani ezininzi zomthetho, Law & More ikunika into eyongezelelweyo.
> Ubuchule be Law & More
> Ifemu yomthetho e-Eindhoven
Apho uninzi lweefemu zomthetho zinolwazi kuphela lwendawo echaziweyo yomthetho wethu kwaye zihlala zenza imisebenzi, Law & More ikubonelela ngenkonzo ekhawulezayo kunye nendlela yakho yobuqu ukongeza kuzo zombini ulwazi olubanzi kunye noluthe ngqo. Umzekelo, amagqwetha ethu ziingcali kwicandelo lomthetho wosapho, umthetho wezabasebenzi, umthetho wequmrhu, umthetho wepropathi enomgangatho kunye nokuthotyelwa. Kwaye xa kuziwa kwiinkampani, Law & More isenzo soosomashishini kumasebe ahlukeneyo, anje ngemizi-mveliso, ezothutho, ezolimo, ezempilo kunye nokuthengisa. Ngaba ujonge enye indawo yomthetho? Emva koko nceda jonga kwiphepha lethu lobuchwephesha apho zonke iindawo zethu zomthetho zidweliswe khona.
Ifemu yomthetho e-Eindhoven nase Amsterdam
Ubuchule be Law & More kwi-Eindhoven
Nokuba uthini uhlobo lomcimbi wezomthetho, wethu Law & More Amagqwetha ayakwazi ukukukhokela kwaye akuncede ukusuka ekuqaleni ukuya ekupheleni kwayo nayiphi na inkqubo yezomthetho, besekele umsebenzi wabo kwisicwangciso esicingisiswe kakuhle, nesisezingeni eliphambili. Inkampani yethu yamagqwetha ikwabonelela ngokusonjululwa kweembambano ezisemthethweni kunye neenkonzo zokumangalela kwiinkampani zombini nakubantu babucala kwaye iqhuba uvavanyo olunokulinganisela lwamathuba nobungozi ngaphambi kwazo zonke iinkqubo zomthetho. Kwaye xa kuziwa kwinkqubo yezomthetho, amagqwetha ethu avela e-Eindhoven azokulwela. Emva kwayo yonke loo nto, sikholelwa ekubeni wonke umntu kufuneka abe nethuba lokuzimela ngamalungelo akhe. Kungenxa yoko le nto silwela elona xabiso liphezulu lomgangatho kubathengi bethu, ukuze uqiniseke ukuba utyalomali lwakho luya kuzihlawulela. Nangona kunjalo, Law & More ayiboneleli ngeenkonzo zomthetho kuphela njengomcebisi kunye nommeli wesimangalo kodwa ikwafumaneka kuwe njengeqabane elithandanayo.
Ifemu yomthetho e-Eindhoven
Ukongeza, ukongeza kulwazi lwethu olubanzi lomthetho waseDatshi (wenkqubo), sinamava amaninzi aphesheya. Iofisi yethu ayisiyomhlaba wonke ngokubhekiselele kububanzi kunye nohlobo lweenkonzo zayo, kodwa ikwanakoluhlu lwabathengi abaphambili beli nakwamanye amazwe. Ukubonelela abathengi bethu ngeyona nkonzo ibalaseleyo, sineqela elizinikeleyo lamagqwetha eelwimi ngeelwimi kunye namagqwetha, alwaziyo ulwimi lwaseRussia, phakathi kwezinye izinto. Ke, nokuba ungumntu wasemzini yinkampani yelinye ilizwe okanye umntu wabucala okanye ujongana nomcimbi osemthethweni malunga nomlingane welinye ilizwe, Law & More Amagqwetha akho ngawe! Ngaba unomdla ngendlela yethu yokusebenza kunye nento esinokukwenzela yona? Ke nceda unxibelelane nathi.
Ke, ngaba ujonge ulwazi lweofisi enkulu yokudibanisa? Kodwa ngaba ungathanda ukuba nonxibelelwano lobuqu, njengeofisi encinci yevenkile? Emva koko Law & More yinkampani yamagqwetha yase-Eindhoven eyenzelwe wena. Law & More yinkampani yamagqwetha eguquguqukayo, eyahlukeneyo, ekwiScience Park e-Eindhoven, ekwabizwa ngokuba yiSilicon Valley yase-Netherlands esebenza kuluhlu olubanzi lwabathengi basekhaya nakwamanye amazwe, iinkampani, amaziko kunye nabantu. Amagqwetha ethu e-Eindhoven akunika inkonzo engaphezulu kwezinye iiofisi. Umzekelo, iofisi yethu yase-Eindhoven ineeyure zokuvula ezivulekileyo kwaye sikwavula nangokuhlwa nangeempelaveki (Mon / Fri 8.00 - 22.00, Sat / So 9.00 - 17.00). Ngapha koko, siqhele ukusebenza ngokukhawuleza okukhulu, ke akukho mfuneko yokuba ulinde ixesha elide ukuba siphendule imeyile yakho okanye ngaphambi kokuba ube nomnye wabasebenzi emnxebeni.